hal god oo qasabada musqusha qasacadaysan nikkel
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya / WOWOW Musqusha Musqusha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Swivel Spout Nukliyeerka Nadiifiya
WOWOW Musqulaha Qubayska Musqusha Isku Darka Swivel Spout Nickel Nickled
Suuliga musqulaha musqulaha
Matate madow oo waari kara: Waxay ka hortagtaa burburka iyo miridhku in si joogto ah loo isticmaalo.
Si fudud ayaa loo dejiyaa: dalool dalool ah oo loogu talagalay rakibidda dadaal la'aan
Fudud oo la adeegsado: Hal gacan qabsi oo si fudud loo xakameeyo biyaha qabow iyo kulul
2320200 tilmaamaha rakibaadda
Qalabkan 1 gacmeedka ah ee tubada saxanka suuliga 2320201 wuxuu leeyahay faa iidooyin badan.waxa uu keydsadaa biyaha wuxuuna leeyahay naqshad qurxoon.Waxaa la dhihi karaa waa talo soo jeedinta ugu horeysa jikada iyo qasabada musqusha.
Tuubada Sink Musqusha ama Basin loogu talagalay Dajinta 1-Hole; Dhererka: 11 ″; Gaaritaanka Gawaarida: 7 ″; Cabirka Daloolka: 1.4 ”(Fadlan Qiimee godkaaga Cabirka marka hore intaadan dalban).
Tuubada Musqusha & Qubeyska: qasabad loogu tala galay saxanka ama saxanka, waxaa loo isticmaali karaa musqusha iyo jikada, Qaansada sare iyo wareejinta 360-ka ah waa mid ay ku anfacayaan labada saxan marba marka aad sameyneyso howlo badan.
Qalabka jikada ee steel steel Fluff Nickel: wuxuu u adkeysan karaa maalin walba xoqida iyo miridhku, walxaha birta ee birta ah iyo jirka birta zinc, adag oo waara, u fiican guriga, qubeyska, jikada, hudheelka, maqaayadda, abaarmanka, guryaha kirada ah iwm.
Qalabka Tayada leh: tuubada biyaha biyaha lagu cabo ee caadiga ah ee Mareykanka iyada oo loo maro qoraalka amniga, tuubooyinka faleebada aan dhib lahayn, iyo hoormaanta bilaashka ah ee gudaha gudaha si loo hubiyo heerka biyaha Wanaagsan, Dhamaan qalabka rakibaalku wuxuu ku jiraa bir aan fiicnayn, xoqayn oo bilaash ah.
CAYMISKA LIFETIME oo leh TAAGEERADA MACMIILKA: oo daboolay 90-maalmood soo laabasho lacag la’aan ah iyo damaanad-qaadka nolosha!
SKU: 2320201 Categories: Qubeyska Musqusha, Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya Tags: 1 Qabashada, Nickel caday, ahama Steel
La iibiyey: 48